राजनीति – Page2– Hamropati.com
Home»राजनीति (Page 2)
By on February 11, 2018 राजनीति
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)ले अहिले आफुले चालिरहेको कदमबाट देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने जस्तो लागेन भने अर्कै फड्को मार्न सक्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनको भरतपुरस्थित तीनखोले महाबौद्ध गुम्बाको उदघाटन समारोहमा बोल्दै उनले राजनीति संकटबाट देशलाई निकास दिन आफू मियोका रुपमा भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘म अहिले […]
रसुवाका सांसद आचार्यले दिए बाटो खन्न १ करोड ७० लाख ।
By on February 10, 2018 राजनीति
काठमाडौं । निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यले आफ्नै लगानीमा जिल्लाको सडक निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाएका छन् । समृद्ध रसुवा निर्माणको मुद्धा लिएर निर्वाचनमा गएका सांसद आचार्यले सडक सञ्जालले नछोएका गाउँटोलमा बाटो पुर्याउन व्यक्तिगत लगानीमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँका स्काभेटर र डोजर उपलव्ध गराएर सडक पुर्याउने कार्यको शुरुवात गरेका हुन […]
By on February 9, 2018 राजनीति
काठमाडौं – एमाले प्रदेश ३ को संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन्। योसँगै उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। डोरमणिले ३४ मत ल्याउँदा अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत ल्याएका छन्। एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५८ जना सांसद छन् । संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन ३० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। […]
मुख्यमन्त्रीको दौडबाट पाण्डे आउट, शाक्य र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा
By on February 9, 2018 प्रमुख समाचार, राजनीति
काठमाडौं– प्रदेश नं ३ को मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका राजेन्द्र पाण्डे निर्वाचन हुने भएपछि यो दौडबाट बाहिरिएका छन् । एमालेले प्रदेश नं ३ मा दलको नेता सर्वसम्मत छान्ने प्रयास गरेपनि असफल भएपछि शुक्रबार निर्वाचन हँुदैछ । शुक्रबार हुने निर्वाचनका लागि पाण्डेले उम्मेदवारी नै दिएनन । ‘ उहाँ (पाण्डे)को उम्मेदवारी ने परेन, अव अष्टलक्ष्मी शाक्य र […]
By on February 8, 2018 प्रमुख समाचार, राजनीति
धनगढी । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई पार्टी एकता सुनिश्चित गर्दै सरकार गठन गर्ने बताएका छन् । धनगढी विमानस्थलमा प्रेस चौतारीद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नेता नेपालले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता र सरकार गठनको तयारी सँगैसँगै भइरहेको बताएका छन् । उनले सरकार गठन र पार्टी एकताको काम एमाले […]
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ६ वटा प्रदेशमा मतदान सुरु
By on February 7, 2018 राजनीति
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत ६ वटा प्रदेशमा मतदान सुरु भएको छ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय तय भएको छ । ६ वटै प्रदेशमा मतदान सुरु भइसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा सबै सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएकाले मतदान गर्नुनपर्ने निर्वाचन […]
डा. गोविन्द केसीको कडा चेतावनी–त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त नगरे कडा संघर्षका कार्यक्रम गरिने
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसबमोजिम त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका मा अघि सार्दै पूरा नभए कडा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसबमोजिम त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने, अन्य विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई कारवाही […]
कुनै पनि बहानामा पार्टी एकताबाट पछी हट्ने छुट कसैलाई छैन : नेता महरा
By on February 5, 2018 राजनीति
दाङ, माघ २२ । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पार्टी एकताका लागि एमाले र माओवादी दुबैले पुरानो पोजिसन छोड्नुपर्ने बताएका छन् । घोराहीमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै महराले दुई पार्टीवीच एकता हुँदा पुरानो मनोविज्ञान त्याग्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नयाँ पार्टी निर्माणमा पुरानो संख्याको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी एकता गर्दा संख्या महत्वपूर्ण कुरा […]
प्रदेश नं १ मा एमाले संसदीय दलको नेता छान्न २६ गते चुनाव हुने
मोरङ, माघ २२ प्रदेश नं १ मा नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता चयनका लागि माघ २६ गते विराटनगरमा निर्वाचन हुने भएको छ। आज बिहान विराटनगरमा बसेको प्रदेश समिति बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले प्रदेश समितिले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता चूडामणि आचार्यको संयोजकत्वमा प्रेम पोखरेल र टीकाराम पुरी सदस्य रहेको […]
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मौन अवधि सुरू
काठमाडौं । बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आइतबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार हुने निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको जनाएको छ । मौन अवधिमा राजनीतिक दलले कुनै पनि प्रकारका चुनावी गतिविधि गर्न पाउनेछैनन् । मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न, […]